निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीको गम्भीर त्रुटी : कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रेग्मी (भिडियो)
१४ मंसिर । निर्मला हत्या काण्डको अनुसन्धानमा प्रहरीको गम्भीर त्रुटी रहेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताएका छन् । प्रहरीको "प्रोफेस्नालीज्म" राजनितीक कारणले समाप्त भएको समेत उनले बताए । सेरोफेरो सम्वादमा कुरा गर्दे रेग्मीले फौजदारी मुद्धाहरुमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्षमता समेत…
सार्वजनिक व्यक्तिको जीवनमा के–कस्ता र कति कुरा निजी हुन्, के–कस्ता र कति सार्वजनिक ? सार्वजनिक गर्न मिल्ने गतिविधि र गर्न नमिल्ने के हुन् ? मानिस आफैँमा कति निजी हो, कति सार्वजनिक ? यही ०७५ कात्तिकको अन्तिम साता सोसियल मिडियामा भाइरल भएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड…
सुध्रिएन कर्मचारीतन्त्र, पासोमा पर्यो ओली सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’
गत असोज १८ गते संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठकमा सांसदहरुले संघीयता असफल पार्न कर्मचारी तन्त्र नै लागि परेको आरेप लगाए । नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशाशनको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले गंभिर प्रश्न उठाए र आक्रोश पनि । सांसदहरुले सार्वजनिक प्रशाशनका प्रमुख…
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई समान महत्व दिएर अघि बढेका छौं-सभामुख शाही (भिडियो)
२२ कात्तिक । कर्णाली प्रदेश सभाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई समान महत्व दिएर अघि बढेको र आगामी दिनमा बढ्ने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताएका छन् । प्रतिपक्ष आकारमा जुन भएपनि सुनेर जानुपर्ने र जिम्वेवारी दिएर जानुपर्ने संसदीय मान्यता अनुसार अघि बढेर समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने सभामुख शाहीले…
उनलाई पछिसम्मै पछुतो भयो
सबैको सबैसँग भेटघाटको प्रसंग बेग्लै किसिमको हुन्छ । र, सम्झना पनि उसैगरी भिन्न । कसैको बारेमा लेख्नु सजिलो कुरा होइन । त्यसमा पनि ‘अबिच्युरी’ लेखनमा ‘मृतकलाई न्याय गर्न नसकिएला कि’ भन्ने डर हुन्छ । सच्याउने अवसर नै हुँदैन। केही नलेख्नु…
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्यअमेरिकी देश कोष्टारिका पुग्नुभयो। कोष्टारिका एउटा सानो लोकतान्त्रिक देश हो, ५० लाख हाराहारी जनसंख्या भएको। कोष्टारिकाको एउटा विशिष्टता छ-यो वातावरणमैत्री विकासको नमूना देश हो। २० वर्षअघि ओजन तह नासिनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी छलफल सुरू भयो। वातावरण…
कर्णालीमा र्‍याफ्टिङ्गको सम्भावना
नेपालमा र्‍याफ्टिङ्गको व्यावसायिक सुरुवात सन् १९८० को दशकबाट भएको पाइन्छ । डिसेम्वर १९८९ मा नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ्ग (NARA) को गठन भइसके पश्चात यस व्यवसायले त्रिशुली, भोटेकोशी, कालीगण्डकी हुदै देशका विभिन्न नदीहरुलाई समेटी ठूलो आकार लिँदै गएको देखिन्छ । सुरुवात दिनहरुमा गोरा छाला भएकाहरुले…
सुर्खेत बसाइको शैक्षिक आत्मसमीक्षा
करीव २३ महिना अघिदेखि बस्दै आएको कोठामा अव बस्नका लागि एक दिन मात्र बाँकी छ । कुनै बेला त यो कोठामा प्रवेश गर्दा पनि अन्यत्रको आक्रोश कोठासँग फेर्न मन लाग्थ्यो । कोठामा छरपष्ट परेका सामानहरु देख्दा पनि मसँग नै नानाथरि निहु खोजेर मलाई नै…
महिला र अपाङ्गता दाँज्न मिल्छ ?
नेपालमा अहिले पनि बृद्ध व्यक्ति, महिला तथा बालबालीकालाई यात्रामा उभिएको देखेर आफु बसेको सिट छोडेर बस्न आग्रह गर्ने कमै व्यक्ति हुन्छन् । यस्तो स्वाभावलाई हामी सबैले संधैभरीका लागी संस्कारका रुपमा बसाल्न नसकेको कुरा सर्वबिदितै छ । पछिल्ला घटना क्रमहरुलाई हेर्दा कसरी असल र प्रतीष्ठित…